Anodzoka uye kurudyi kubviswa - Hanukeii
Anodzoka uye kurudyi kwekubvisa
1. Anodzoka kwekugadzira zvikanganiso.
Mushandisi anogona kudzokera kuna HANUKEII, chero chigadzirwa chinopa kuremara kwekugadzira. Kufunga nezve mhando yezvibvumirano zvigadzirwa, iyo Mushandisi ichave nenguva yemwedzi mumwe yekutaura nayo HANUKEII kushaiwa kwavo kwekuenderana navo. Kana nguva ino yakapfuura, chero kukuvara kuchafungidzirwa neMushandisi.
Kuti udzore kudzoka, Mushandisi anofanira kubata HANUKEII mukati menguva yemwedzi mumwe, kune kero yekubata hanukeii .com, inoratidza chigadzirwa kana zvigadzirwa kuti zvidzoserwe, zvinongedza mufananidzo uye hwakadzama runyorwa rwekuremara kwakawanikwa mariri
Kamwe HANUKEII yakagamuchira kutaurirana kubva kuMushandisi, iyo ichakuzivisa iwe mukati mezuva rebhizinesi 3-5 kuti unokwanisa kana kudzorera chigadzirwa. Kana kudzoka kwaitika, HANUKEII Zvinoratidza kuMushandisi nzira yekuunganidza kana kutumira yakaremara chigadzirwa kumahofisi avo / matura.
Chigadzirwa chimwe nechimwe chinodzoserwa chinofanirwa kunge chisisashandiswe uye nemanyorero acho ese, kuiswa uye, pazvinenge zvakakodzera, zvinyorwa nezvinyorwa zvekutanga zvakauya nazvo. Kana Mushandisi asina kuenderera nenzira iyi, HANUKEII inochengetera kodzero yekuramba kudzoka.
Kana chigadzirwa chacho chagamuchirwa uye zvikanganiso zvasimbiswa, HANUKEII Ichapa Mushandisi mukana wekutsiva chigadzirwa nehumwe hunhu hwakafanana, kunze kwekunge sarudzo iyi isingagone kana kusaenzana HANUKEII.
Muchiitiko icho nekuda kwekushayikwa kwenhumbi, chimwe chigadzirwa chine chimiro chakafanana chaitadza kutumirwa, Mushandisi anogona kusarudza kumisa chibvumirano (ndiko kuti, kudzoserwa kwemari dzakabhadharwa) kana kukumbira kutumira kwemumwe modhi Mushandisi anosarudza nokuzvidira.
Iko kutumirwa kwechigadzirwa chine chimiro chakafanana kana chimiro chitsva chinosarudzwa neMushandisi, sezvakakodzera, ichaitwa mumazuva matatu anotevera ebhizinesi kubva pazuva iro HANUKEII Mushandisi achasimbisa kutsiva kwechirema chigadzirwa kana kutumirwa kwemhando nyowani.
Kutsiva, kutumira kwemuenzaniso mutsva kana kubviswa kwechibvumirano hakuzorevi mari yekuwedzera kune Mushandisi.
Kana Mushandisi achigumisa chibvumirano, HANUKEII ichaita kudzoreredzwa kwemari yakabhadharwa kuMushandisi yekutenga kwechinhu chakakanganisika.
HANUKEII inozivisa Vashandisi kuti iyo nguva yekudzoka kwemari dzakabhadharwa zvinoenderana nenzira yekubhadhara iyo Mushandisi angadai akashandisa pakutenga icho chigadzirwa.
Muchiitiko icho Mushandisi asina kugutsikana nezvigadzirwa zvakagoneswa mugwaro rake, Mushandisi, maererano neMutemo Mukuru wekudzivirira kweVatengi uye Vashandisi, achave nenguva yemazuva gumi nemana (15) yekarenda yekudzosera kuzara yeiyo yekuraira kana, kana uchida, iwe unogona kudzosera chero zvigadzirwa zvinoita iyo yakazara yeti uye zvese pasina chirango uye pasina kudiwa kwekuratidza zvikonzero.
Nekudaro, Mushandisi anofanira kutakura zvakananga mutengo wekudzoka HANUKEII, kunyangwe iwe uchidzosera iyo oda zvizere kana kusarudza kusarudza chete zvimwe zvezvigadzirwa muchirongwa.
Kuti udzore kudzoka, unofanirwa kubata HANUKEII pakero ridza @ hanukeii .com, nekutumira iyo yakazadzikiswa fomu yekubvisa iyo inofambidzana neiyi Mitemo uye Maitiro seANHURE 1. Pakugamuchira kutaurirana kwakataurwa, HANUKEII Icharatidza nzira yekutumira iyo oda kumahofisi ayo kana mavestiresi.
HANUKEII haina mhaka yekambani yekutumira iyo Mushandisi anotora kuti adzore iyo yekuraira. Mupfungwa iyi, HANUKEII inokurudzira kune iyo Mushandisi iyo inoda kuti kambani yekutumira ikupe humbowo hwekutumira kana chete mutengesi aisa chigadzirwa mumahofisi e HANUKEII, kuitira kuti Mushandisi azive kuti chigadzirwa chakapihwa nenzira kwayo HANUKEII. HANUKEII haina mhosva kune kero iyo Mushandisi anotumira iyo yekuraira yekudzoka. Inofanira kugara iri hofisi yedu muchiitiko cheEurope. Kana isu tisina humbowo hwekusvitswa uye mushandisi asina kupa risiti yekutumira, HANUKEII yaisazova nemhosva yekurasikirwa uye anga ari mushandisi aifanira kuzopa kambani yekutakura yaive nekondirakiti.
Mari yekudzosa iyo kodhi (senge yekufambisa mutengo kuburikidza nekambani makambani) inotakurwa zvakananga neMushandisi.
Chigadzirwa chinofanira kunge chisisashandiswe uye nemanyorero acho ese, kuiswa uye, pazvinenge zvakakodzera, zvinyorwa nezvinyorwa zvekutanga izvo zvakauya nazvo. Kana Mushandisi asina kuenderera nenzira iyi kana kana chigadzirwa chacho chave nekumwe kukuvara, Mushandisi anogamuchira kuti chigadzirwa chinogona kuderera kudzikira kana kuti HANUKEII kudzoka kunogona kurambwa.
Rimwechete HANUKEII tarisa kuti kurongeka kwakanaka. HANUKEII ichaenderera ichidzosera iyo huwandu hwakabhadharwa neMushandisi.
Kana Mushandisi akafunga zvekudzosa oda yacho zvizere, HANUKEII anodzokera kuMushandisi mari dzese dzaangadai abhadhara uye kana achinge angodzosera chero zvigadzirwa, chikamu chete chinoenderana neizvozvo zvigadzirwa chinodzoserwa.
HANUKEII inozivisa Vashandisi kuti iyo nguva yekudzoka kwemari dzakabhadharwa zvinoenderana nenzira yekubhadhara iyo Mushandisi angadai akashandisa pakutenga icho chigadzirwa. Chero zvazviri, HANUKEII inodzosera iyo mari yakabhadharwa nekukurumidza sezvazvinogona uye, chero zvakadaro, mukati memazuva gumi nemana kalendari zvichitevera zuva rakadzoserwa chigadzirwa.
Chigadzirwa Chekushambadzira Policy
HANUKEII haina kubvuma shanduko pakati pechigadzirwa chakatengwa neMushandisi kune chimwe chigadzirwa chinopihwa pane Webhusaiti.
Muchiitiko icho Mushandisi achida kuita shanduko yechigadzirwa, ivo vanofanirwa kushandisa kodzero yavo yekubvisa pamusoro peiyo yakagadzwa mundima 6.2 uye vozotenga chigadzirwa chitsva chavanoda.